modem မှတဆင့် run ဖို့ DDNS Configuring + Router က – တေလာ Lopes ツဘလော့
အသိပေးစာ: ဒီ Post ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေအချို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆရှိပါတယ်.
ငါအော်ပရေတာမင်္ဂလာပါ modem / Router က Technicolor TD5136v2 ကို Wi-Fi ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါအားလုံးစတင်, အရမ်းဆိုး! ဒါကြောင့်ငါက Wi-Fi ကို signal ကိုတိုးတက်လျှင်ကြည့်ရှုရန် Asus က RT ကို-N56U router ကိုဝယ်, ဒေတာအရှုံးအသေးအဖွဲ.
ငါ့အသက်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်, ငါ၏အကွန်ယက်ကို cascateei, Router ကိုလက်ျာ Technicolor ချိတ်ဆက် Asus က router ကိုအားမရ. အခြားစကား, အကြှနျုပျ၏အိမျပွကွန်ယက်ကိုရတယ်2router များ. ဒါဟာကောင်းစွာသည်အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့, ငါမူကား NAT ကို configure ခဲ့ရတယ် (port forwarding ကို / န်ဆောင်မှု) နှစ်ဦးစလုံး router များအပေါ်ထွက်အလုပ်လုပ်ငါ့ IP ကိုကင်မရာကဖြစ်စေ (အင်တာနက်ကို). ဘယ်လောက်၏စံနမူနာကိုကြည့်ပါ:
အင်တာနက်      > MODEM ကိုအသုံးပြုပြီး/Oi    > router/ASUS က > COMPUTER/ကင်မရာ
200.28.189.1  > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.N က
အင်တာနက် > MODEM ကိုအသုံးပြုပြီး / Oi > router / ASUS က > COMPUTER / ကင်မရာ 200.28.189.1 > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.N က
ဒီပြဿနာက “အဓိကအားထား” ဒါဟာ DDNS ၌ရှိ၏. ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦး DDNS သည်အဘယ်သို့သိထင်, ငါဒီကိုရောက်လာဘယ်ကြောင့်အားလုံးရဲ့ပြီးနောက်. မဟုတ်ရင်, သုတေသန ယူ. အပေါ်ဖတ်ပါ.
သတိပြုပါ, ကိုပြုသောဤအဆငျ့ဆငျ့နှင့်အတူ, အ modem / ဟိုင်းကိုအင်တာနက်နှင့်အတူ interface ခဲ့ရတယ်နှင့်တစ်ဦးမှန်ကန်သည့် IP ကိုယူသောသူသည်, Router ကိုကတည်းက / Asus ကဟိုင်း / အ modem ကနေမှသာအအေး IP ကိုလက်ခံရရှိ. ဒီကယ့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ငါ DDNS Router က / Asus ကတည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားသောအခါအသောကွောငျ့, သူသည်အောက်ပါအမှားပေး၏:
"The wireless router currently usesaprivate WAN IP address (192.168.x.x, 10,x က,x က,x က, သို့မဟုတ် 172.16.x.x).. ဒီ router သည်မျိုးစုံကို-NAT ပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ်စေခြင်းငှါနှင့် DDNS ဝန်ဆောင်မှုဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး"
အဆိုပါ site ကိုသူ့ဟာသူ Asus က ယခုပင်ဤပြဿနာကိုမှသတိပေး:
မှတ်ချက်: ကြိုးမဲ့ပုဂ္ဂလိက IP address ကို WAN သုံးပြီးလျှင် (192.168.x က.x က, 10.x က.x က.x က, သို့မဟုတ် 172.16.x က.x က), ဒီ router ကိုတွေ့ရှိမှုသည်-ဖြစ်-တစ်ပေါင်းစုံကွန်ယက်ကိုလိမ့်မည်-အလွှာ NAT. အဆိုပါ DDNS ဝန်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏ဤအမျိုးအစားမှာအလုပ်မလုပ်မပြုစေခြင်းငှါ
မှတ်ချက်: ကြိုးမဲ့ပုဂ္ဂလိက IP address ကို WAN သုံးပြီးလျှင် (192.168.x.x, 10.x.x.x, သို့မဟုတ် 172.16.x.x), este router ကို encontrar-se-á numa rede Multi-layer ကို NAT. အဆိုပါ DDNS ဝန်ဆောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏ဤအမျိုးအစားမှာအလုပ်မလုပ်မပြုစေခြင်းငှါ
အဆိုပါဖြေရှင်းချက် modem / ဟိုင်း၌အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခဲ့ “mode ကိုတံတား” (လမ်းတံတား), အခြားစကား, အ modem / မင်္ဂလာပါပဲ modulator တွေကိုနှင့် demodulator အဖြစ်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှဖြစ်ပျက် (နောက်တဖန် Router က), Router ကို / Asus ကတိုက်ရိုက်တစ်ခုလုံးကိုဒေတာစီး retransmitting. ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ, Router ကိုသူ့ဟာသူ / Asus ကအင်တာနက်ကိုကသူတို့ရဲ့အပျနှံထားသော interface ကိုအတူနေဖို့လျှင်အဖြစ်က, ထို IP ကို ​​WAN သက်တမ်းရှိရတဲ့နှင့် PPPoE authentication ကိုအောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခြင်း. ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု:
အင်တာနက်      > MODEM ကိုအသုံးပြုပြီး/Oi     > router/ASUS က > COMPUTER/ကင်မရာ
200.28.189.1  > တံတား BRIDGE/ပိုတငျး > 192.168.0.1 > 192.168.0.N က
အင်တာနက် > MODEM ကိုအသုံးပြုပြီး / Oi > router / ASUS က > COMPUTER / ကင်မရာ 200.28.189.1 > တံတား BRIDGE / ပိုတငျး > 192.168.0.1 > 192.168.0.N က
အ modem နှင့် Router ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း (တံတား mode ကို)
Next Post, ငါ modem နှင့် Router ကဟိုင်း Asus ကရည်ညွှန်းပေမဲ့, configuration ကိုမည်သည့် modem သို့မဟုတ် Router ထဲတွင်အလားတူဖြစ်နိုင်.
လှမ်း 1 – တံတား mode ကိုအတွက် modem Place (လမ်းတံတား)
မင်္ဂလာပါ / အ modem control panel ကို access. ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကို http စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုသည်://192.168.0.1 (သို့မဟုတ်အခြားအိုင်ပီအဖြစ် 192.168.1.1, 10.0.0.1, စသည်တို့ကို). ကို default username နှင့် password ကိုဖြစ်ပါတယ် “admin ရဲ့” နှစ်ခုစလုံးအတွက်. အောက်ပါ setting ကိုရှာပါနဲ့ကိုပြောင်းလဲ:
တည်ဆောက်သည် > အင်တာနက်ကို Setup ကို > အင်တာနက်ကိုချိန်ညှိ > အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်အမျိုးအစား > တံတား Mode ကို (အစား PPPoE)
လှမ်း2– အ modem နှင့် Router ကိုအကြားကွန်ယက် cable ကိုချိတ်ဆက်ပါ
ဘုံကွန်ယက်ကို cable ကို ယူ. (UTP – RJ / 45) နှင့်ထုတ်ကုန်များအကြားအကူးအပြောင်း: တဦးတည်းအဆုံး၏တဦးတည်းထဲသို့ဝင်4modem port များ / ဟိုင်းနှင့်အခြား WAN သို့ / အင်တာနက် router ကို / Asus ကဝင်.
လှမ်း3– enabled DHCP နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန် Router ကို Configure လုပ်နည်း
ထို router ရဲ့ control panel ကို / Asus ကသုံးစွဲနည်း. ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကို http စာရိုက်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုသည်://192.168.1.1 (သို့မဟုတ်အခြားအိုင်ပီအဖြစ် 192.168.0.1, 192.168.2.1, 10.0.0.1, စသည်တို့ကို). ကို default username နှင့် password ကိုဖြစ်ပါတယ် “admin ရဲ့” နှစ်ခုစလုံးအတွက်. အောက်ပါ setting ကိုရှာပါနဲ့ကိုပြောင်းလဲ:
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > LAN > အခြေခံပညာ Config > DHCP က Server ကို Enable > ဟုတ်ကဲ့
လှမ်း4– PPPoE authentication ကိုမှ Router ကို Configure လုပ်နည်း
ထို router ရဲ့ control panel ကို / Asus ကသုံးစွဲနည်း. အောက်ပါ configuration ကိုရှာရန်နှင့်လုပ်:
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အခြေခံပညာ Config > WAN Connection ကိုအမျိုးအစား > PPPoE
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အကောင့်ဆက်တင်များ > ပီပီပီအသုံးပြုသူအမည် > Oi@Oi
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အကောင့်ဆက်တင်များ > Password ကို > oi123
#1 အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အခြေခံပညာ Config > WAN Connection ကိုအမျိုးအစား > PPPoE #2 အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အကောင့်ဆက်တင်များ > ပီပီပီအသုံးပြုသူအမည် > Oi @ Oi #3 အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > အကောင့်ဆက်တင်များ > Password ကို > oi123
ဒီ username နှင့် password ကို PPPoE စံမင်္ဂလာပါဖြစ်ပါသည်. သိသာထင်ရှားတဲ့သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောလျှင်အခြား username နှင့် password ကိုအသုံးပြုရပါမည်. သငျသညျမသိလျှင်, ကိုယ့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောခေါ် PPPoE authentication ကိုရဲ့ login data ကိုမေးမြန်း. ဖုန်းမင်္ဂလာပါဖြစ်ပါသည် 10631.
ဤအမှုကိုပြု, သင်၏ Internet Wi-Fi ကို router ကို / Asus ကတဆင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းအဘို့အပြီးသားက. တစျခါတက connection ကို authenticate နှင့်တည်ထောင်ရန်ခဏတစ်ယူနိုင်ပါသည်, လူနာဖြစ်. ငါသည်ဤသို့ဆို, ဒါကြောင့်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်; ငါကအလုပ်လုပ်မခံခဲ့ရထင်ပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းအနည်းငယ်ကိုကြာကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့. အဲဒီမှာ Testa!
တစ်ဦး DDNS ဖန်တီးခြင်းနှင့် configuring
တကယ်တော့ဒီပို့စ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါခေါ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ့ဆုံခဲ့သောကြောင့်, DNS ကို-O-MATIC. တည်ငြိမ်သော, ငါရှင်းပြပါ!
အဆိုပါကြီးမားတဲ့ပြဿနာ router များ DDNS အနည်းငယ်ဆာဗာကိုထောကျပံ့ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမ-IP နဲ့ DynDNS မှယေဘုယျအားဖြင့်ကန့်သတ်. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမက-IP နဲ့ DynDNS မေ့လျော့တော်! ဤဝန်ဆောင်မှုများအပြည့်အဝအခမဲ့သို့မဟုတ်သည့်အခါမဟုတ်, သူတို့ကန့်အသတ်ရှိ, တိုင်းသက်တမ်းတိုးရန်ရှိခြင်းတူ 30 နေ့ရကျနှငျ့ဤ saccal ဖြစ်ပါသည်!
ငါအထူးသဖြင့်သုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက် ကွောကျသော (FreeDNS), ကအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်တကယ်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. Router ကိုကွောကျထောကျပံ့မပါဘူးဆိုရင်သို့သော်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို? အဘယ်မှာရှိ DNS ကို-O-MATIC ဒါကင်. ကံကောင်းတာက Asus ကကနေ Router က DNS ကို-O-MATIC ထောက်ခံပါတယ်, ငါ၏အ subdomain ကွောကျပေါ်တွင်နေသူများကဖန်တီးသည်ဟုသင်တို့သည်ငါ၏ DNS ကို-O-MATIC ပေါင်းသင်းခွင့်ပြု, နေ့စွဲငါ့ WAN IP ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း. နားမလညျခဲ့ပါ? ကျနော်တို့ထို့နောက် By လိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သင့် router ၏ DNS-O-MATIC ထောကျပံ့ရှိပါတယ်လျှင်ဤသာအသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့သတိရ.
လှမ်း 1 – တစ်ဦး Create (ခွဲ)ကွောကျပေါ်ဧရိယာ
1. ဝင်ရောက်ခွင့် http://freedns.afraid.org
2. "Setup ကိုဒီနေရာမှာအကောင့်တစ်ခု" "Dynamic DNS ကို" ကိုနှိပ်ပါနဲ့ menu ကိုသဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး.
3. အတွက် Log, သိုက်မရှိ menu ကို "subdomain"e", add"
4. အဘယ်သူမျှမ combobox "ဒိုမိန်း" Que မှတ်ချက်, မကုန်မဆုံး, ဒါဟာ "အများစုကအများအပြားပိုပြီးရရှိနိုင်ပါ ... " option တခုရှိပါတယ်, ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
5. လာမည့်မျက်နှာပြင်တွင်, "အ Shared ဒိုမိန်း Registry ကို" ကိုနှိပ်ပါနဲ့ရရှိနိုင် domains များထောင်ပေါင်းများစွာ၏တဦးကိုရှေးခယျြ.
လှမ်း2– သော့ကိုရယူခြင်း (သော့) အဘယ်သူမျှမ afrai.org
(သငျသညျရှေ့ကိုဒီ key ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်!)
2. အဘယ်သူမျှမ menu ကို Dynamic DNS ကို Clique,
3. စာမျက်နှာရဲ့အဆုံးမှာ, အဘယ်သူမျှမ link ကို clique “တိုက်ရိုက် URL ကို” သငျသညျအဆင့်အတွက်ဖန်တီး subdomain ကိုရည်ညွှန်းပြီး 1
4. သော့ချက် (သော့) ပြီးနောက် URL ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် “update.php?”.
ထွ: iXU5V6yRRjBGa GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
တိုက်ရိုက် URL ကို: ကို http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
သော့ (သော့): iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
တိုက်ရိုက် URL ကို: ကို http://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf Chave (သော့): iXU5V6yRRjBGa GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
လှမ်း3– DNS ကို-O-MATIC ပေါ်တွင် account တစ်ခု ဖန်တီး. တစ်ဝန်ဆောင်မှုထည့်ပါ (ကွောကျသော)
1. ဝင်ရောက်ခွင့် https://www.dnsomatic.com/
2. "အခမဲ့ DNS ကို-O-MATIC အကောင့်ဖန်တီး" ကိုနှိပ်ပါနဲ့အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး
3. အတွက် Log, "အတစ်ဝန်ဆောင်မှု Add" button ကို click
4. အဘယ်သူမျှမ combo “–တစ်ဝန်ဆောင်မှုကို Select လုပ်ပါ–“, ရှေးခယျြခွငျး “afraid.org”
5. အဘယ်သူမျှမ Campos Key ကို(?) သငျသညျအဆင့်အတွက်ဖန်တီး subdomain ကိုရည်ညွှန်းက Key Paste 1.
အဆင့်အတွက် key ကိုရဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုပါ 2: “သော့ကိုရယူခြင်း (သော့) အဘယ်သူမျှမ afrai.org”
6. ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “pdate အကောင့်အင်ဖို”
လှမ်း4– Router ကိုအပေါ် DNS ကို-O-MATIC Configuring
အောက်ပါ configuration ကိုရှာရန်နှင့်လုပ်:
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > DDNS > Server ကို > WWW.DNSOMATIC.နဲ့
အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိ > WAN > DDNS > Server ကို > WWW.DNSOMATIC.COM
1. တွင် “Server ကို”, ရှေးခယျြမှု WWW.DNSOMATIC.COM
2. တွင် “host ကအမည်”, နေရာ “all.dnsomatic.com” (သို့မဟုတ်အလွတ်ထားခဲ့ပါ)
3. တွင် “အသုံးပြုသူအမည်ဒါမှမဟုတ် E-mail ကိုလိပ်စာ”, က DNS-O-MATIC အပေါ်နေသူများကဖန်တီးသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူရိုက်ထည့်ပါ
4. တွင် “Password ကိုသို့မဟုတ် DDNS Key ကို”, သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို DNS ကို-O-MATIC အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါ
5. နောက်ဆုံး, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “Apply”
ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, DDNS Router က / Asus က, DNS ကို-O-MATIC အားဖြင့်, အကွောကျတွေနဲ့အိုင်ပီ WAN ကို update ၏တာဝန်ခံကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်.
ထို, ယခုသငျသညျရက်စွဲအထိအိုင်ပီနှင့်အတူတစ်အခမဲ့ဒိုမိန်းများ! ဘယ်တော့မှမမျှမ-ip, DyDNS ဘယ်တော့မှ.
စုစုပေါင်း access: 21792
28 ဇန္နဝါရီလ 2017 တေလာ Lopes	ကွောကျသော, Asus, တံတား, ddns, DNS-o-MATIC, dnsomatic, dyndns, freedns, modem, နတ်, အဘယ်သူမျှမ-ip, Router က, ကို technicolor
4 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “modem မှတဆင့် run ဖို့ DDNS Configuring + Router က”
7 သြဂုတ်လ 2018 သို့ 15:35
Leandro ဆန်းတို့စ (lINK) ကပြောပါတယ်:
ငါသည်ငါ့ router ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်နှင့်သူ၏အစွန်အဖျားအလွန်လွယ်ကူခဲ့တယ်.
ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင် DDNS ငါအတူတူ Asuscomm.com ကိုအသုံးပြု.
10 စက်တင်ဘာလ 2018 သို့ 0:08
လူးဝစ်ဂူစတာဗို MOREIR ကိုပြုပြင်သည် ကပြောပါတယ်:
နံနက်ကောင်းသော. ကြီးမြတ်တိုင်, ဒါပေမယ့်ငါ live fiber ကိုသုံးတယ်။ Bridge mode ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ဖုန်းလိုင်းနဲ့ remote modem support ကိုငါဖြတ်လိုက်ပြီ. သင်ကအခြားလမ်းလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြ၏?
7 ဧပြီလ 2020 သို့ 11:50
3 မေ 2020 သို့ 11:12
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.004.575 ဝင်ရောက်ခွင့်